SS LAZIO VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
SS LAZIO VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
(Roma) 28 Feb 2018 – Waxaa caawa jirta ciyaar xiise badan oo ka tirsan lugta 2-aad ee nus-dhamaadka Coppa Italia oo dhexmaraysa labada kooxood ee SS Lazio vs AC Milan oo lugtii hore 0-0 isku mari waayay.
Dhanka Lazio: Inzaghi ayaa safka 1-aad shaki yar ka qaba: Caceres ayaa buuxinaya booska Bastos. garab weerarka midig waa Marusic – oo 2 kulan ka ganaaxan horyaalka – kaasoo ka cad cad Basta. Weerarka waxaa kusoo laabanaya Luis Alberto, alle spalle oo buuxinaya gabrabka Immobile.
Dhanka Milan: Gattuso ayaa lasoo shirtegi doona shaxda ugu wanaagsan. Shakiga kaliya ee jiraa waa kan dheelaya Kalinic iyo Cutrone iyadoo uu ninka hore cad cad yahay ama fooska xigo. Calabria ayaa difaacaya dadabka midig.
Digiin qabayaal: Cutrone, Borini, Biglia, Locatelli.
23 GUERRIERI, 25 VARGIC, 15 BASTOS, 27 LUIZ FELIPE, 7 NANI, 13 WALLACE, 8 BASTA, 20 CAICEDO, 5 LUKAKU, 96 MURGIA, 4 PATRIC, 10 F. ANDERSON
90 A. DONNARUMMA, 75 GUARNONE, 22 MUSACCHIO, 20 ABATE, 17 ZAPATA, 15 GOMEZ, 73 LOCATELLI, 18 MONTOLIVO, 4 JOSÉ MAURI, 63 CUTRONE, 11 BORINI, 9 ANDRÉ SILVA
Conti, Storari, Antonelli
JUVENTUS VS ATALANTA: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
"Yaan laga walwalin Alexis Sanchez" - Ryan Giggs oo la hadlay taageerayaasha Man United